Home / Blog / Ny efitrano fandroana ao an-trano, misafidy ny trano fidiovana amin'ny rindrina? Sa trano fidiovana gorodona?
2021 / 04 / 12 FisokajianaBlog 4423 0
Ny fanavaozana dia mila eritreretina betsaka, alao ny trano fidiovana, misy safidy roa ao amin'ny trano fidiovana amin'ny rindrina sy ny gorodona, ka ahoana no tokony hisafidianantsika ireo roa ireo? Androany isika dia handinika ny fahasamihafana sy ny tombony ary ny fatiantoka amin'ny karazan-trano fidiovana roa, hahafantarantsika azy haingana.
Inona ny trano fidiovana ao anaty rindrina?
Ny trano fidiovana ao anaty rindrina dia antsoina koa hoe trano fidiovana mihantona. Izy io dia voaforon'ny fitoeran-drano ao anaty rindrina ary lavaka mipetraka any ivelany. Mamonjy habaka ary manome fahatsapana fomba any amin'ny trano fidiovana, manampy rivotra ambony any amin'ny trano fidiantsika.
Inona ny trano fidiovana amin'ny gorodona?
Ny trano fidiovana amin'ny gorodona no karazan-trano fidiovana mahazatra antsika, izay latsaka any ambany ny fidiovana. Matetika ny fantsakan'ny gorodona dia toy izany ny fantsom-pivoahana any ambony rihana sy ny fantsom-pivoahan'ny gorodona mamaky ny gorodona, manao fikojakojana amin'ny tampon-trano ambany, ary avy eo miditra ao amin'ny fantson-drano, izay matetika ampiasaintsika ankehitriny.
Ny tombony azo amin'ny trano fidiovana amin'ny rindrina
1 value Sarobidy be
Ny fidiovana ao anaty rindrina dia azo aseho ivelan'ny fantsom-panafody tsy tsara tarehy hiafina, tsy mahita fantsona isan-karazany intsony, manatsara ny fon'ny olona, ​​fa avelao ho be sy malalaka koa ny habaka eo no ho eo.
2, mora diovina
Ho an'ny olona sasany manana fetisy fahadiovana dia mety tsara ny trano fidiovana ao anaty rindrina. Tsy sarotra ny manadio ny zorony maty, noho izany dia mora ny manadio ny trano fidiovana.
3, Mora ny mihetsika
Raha mila manova ny toerany ny trano fidiovana ao anaty rindrina, dia mety ihany koa ny mihetsika, tsy misy fameperana.
4, tabataba ambany
Amin'ny ankapobeny, ny fitoeran-drano misy fidiovana mahazatra dia mifandray mivantana amin'ny lavaka, ka rehefa manafosafo ny trano fidiovana dia mafy be ny fikorianan'ny rano, ary mety hisy fiantraikany amin'ny olona hafa io tabataba io. Ny trano fidiovana ao anaty rindrina dia miafina ao anaty rindrina satria miafina ao anaty rindrina ny fitoeran-drano, ka tena kely ny feon'ny rano mikosoka.
Ny fatiantoka amin'ny trano fidiovana amin'ny rindrina
1 、 Mora vaky
Ny faritra anatiny amin'ny trano fidiovana ao anaty rindrina dia simba haingana.
2, fahaiza-mitondra entana
Raha ny fahaiza-mitondra ny fidiovana amin'ny trano fidiovana dia ambany noho ny an'ny trano fidiovana amin'ny gorodona ny fahafahan'ny enta-mavesatry ny fidiovana amin'ny rindrina.
3 、 Fanamboarana manelingelina
Tena manelingelina ny fanamboarana, raha vao misy olana ny trano fidiovana, manahirana be ny manamboatra azy ary tsy maintsy vahana ny rindrina.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny kabine ambanin'ny tany
1, somary kely ny tabataba mamoaka feo, saika azo antsoina hoe mangina.
2, matanjaka kokoa ny hery fanosehana, mora kokoa ny mamoaka ny diky miraikitra amin'ny tampon'ny fidiovana, manadio tena madio, ka madio toy ny vaovao ihany ny fidiovana.
3, ny vokatry ny fanoherana ny fofona raha oharina amin'ny trano fidiovana hafa dia tsara kokoa, esory ny fofon'ny fandroana.
Ny fatiantoka ny trano fidiovana ambany
1, rehefa manafosafo dia tsy maintsy apetrakao ambonin'ny rano avo dia avo ny rano alohan'ny ahafahanao manadio tsara ny diky, ary amin'ny ankapobeny dia mampiasa rano 8L ka hatramin'ny 9L hanatrarana ny tanjon'ny fikosehana, izay fako rano raha ampitahaina amin'ny karazany hafa. ny trano fidiovana.
2 、 Ny savaivon'ny fantson-drano dia 56cm eo ho eo, raha manipy ny papier fidiovana ao anaty trano fidiovana ianao dia ho voahidy.
Na trano fidiovana amin'ny rindrina na trano fidiovana amin'ny gorodona, misy ny tombony sy fatiantoka, ny fomba hisafidianana ny safidy manokana na arakaraka ny fahazarana manokana hisafidianana, raha ny marina, dia miankina amin'ny inona ny lafin-javatra tianao kokoa.
Previous :: Mihetsiketsika indray ny onja mangatsiaka! Vokatra amin'ny fandroana, Ahoana no hisorohana ny hatsiaka? Next: Ampy ny efitra fandroana iray, maninona no mila trano fandroana roa any Sina ianao?
2021 / 04 / 22 2595
2021 / 04 / 22 2441
2021 / 04 / 21 3383
2021 / 04 / 12 5112
2021 / 04 / 12 5094
2021 / 04 / 11 4517